Ulwazi malunga ne-Mineral Shungite
I-geology yale 'magic mineral'
I-Shungite yinto elukhuni, elula, enobumba obumnyama obunomthi owaziwa "umlingo" oqhutyelwa kakuhle yi-crystal therapists kunye nabathengisi bamaminerali abanikezelayo. Iingcali ze-Geologists ziyazi njengendlela ekhethekileyo yekhabhoni eveliswa yi-metamorphism yamafutha angcolileyo. Ngenxa yokuba ayinaso isakhiwo se-molecular molecular, i-shungite iphakathi kwemineraloids . Imele enye yepowuni yokuqala ye-oli, ukusuka kwi-Precambrian time.
Lapho iShungite ivela khona
Amazwe ajikeleze iLake Onega, kwiRiphablikhi yaseYurophu yasentshonalanga ye-Karelia, ahlaselwa ngamatye e-Paleoproterozoic ubudala, malunga neminyaka eyi-2 bhiliyoni ubudala. Ezi ziquka i-restamphophosed remains of a great province of petroleum, okubandakanya zombini i-oil shale imithombo yamatye kunye nemizimba yeoli engcolileyo eyafuduka ngaphandle kwee-shales.
Ngokucacileyo, kanye emva kwexesha, kwakukho indawo enkulu yamanzi e-brack-water lagoons kufuphi ne-chain of volcanoes: izilwanyana zazala amaninzi amaninzi e-algae e-celled kunye ne-volcano zivelise izondlo ezitsha kunye nezidumbu ezazingcwatywa ngokukhawuleza zazo . (Isimo esifanayo sivelisa ioli kunye negesi idiphozi yaseCalifornia ngexesha le-Neogene .) Kamva kwixesha la matwala aphantsi kobushushu obunzima kunye noxinzelelo olwenzela ioli kwi-carbon-shungite.
I-Shungite ibonakala ngathi i- asphalt enzima kakhulu (ibhitumen), kodwa ihlelwa njenge-pyrobitumen kuba ayinyibiliki.
Kwakhona kufana ne-anthracite amalahle . Isampula sam shungite ine-lusimlic luster , ubunzima be - Mohs obune -4, kunye nokuphulwa kwe-conchoidal ephucukileyo. Ixutywe phezu kwe-butane lighter, iqhuma ibe yincinci kwaye ikhuphe i-tarry tarry, kodwa ayitshisi.
Kukho inkcazelo engafanelekanga ejikelezayo malunga ne-shungite.
Kuyinyaniso ukuba ukuqala kokuvela kwendalo kwe-fullerenes kwakubhalwe kwi-shungite ngo-1992; Nangona kunjalo, le ngcaciso ayikho kwi-shungite eninzi kwaye ifikelela kwipesenti ezimbalwa. I-Shungite iye yahlolwa kwi-magnification ephezulu kwaye ifunyenwe ukuba isakhiwo se-molecule esingaqondakaliyo kunye nesigxina. Ayikho enye ye-crystallization yegraphite (okanye, ngenxa yento, yedayimane).
I-Shungite sele ithathwa njengento ephilileyo eRussia, apho ukususela nge-1700s isetyenziselwa nje ukuhlambulula amanzi kunye ne-disinfectant njengokuba sisisebenzisa i-carbon esebenzayo namhlanje. Oku kuye kwanyuka kwiminyaka ukuya kumaqela amaninzi aphakanyisiweyo kwaye axhaswa ngokungafanelekanga ngamaminerali kunye ne-crystal therapists; isampuli nje yenza uphando kwigama elithi "shungite." Ukuqhuba kwayo kombane, okuqhelekileyo kwegraphite kunye nezinye iiforibhoni ecocekileyo, kuye kwakholelwa inkolelo eyaziwayo yokuba i-shungite ingakwazi ukuchasana nemiphumo emibi ye-electromagnetic radiation kwizinto ezinjengefowuni.
Umvelisi we-shungite eninzi, iCarbon-Shungite Ltd., unikezela abasebenzisi bezentengiso ngeenjongo ezingaphezulu: i-steelmaking, unyango lwamanzi, iingubo zepeyinti kunye nokuzaliswa kwiplastiki kunye nerubha. Zonke ezi njongo zifaka indawo ye coke (i-metallurgical charter) kunye ne- carbon black .
I-nkampani iphinda ibange inzuzo kwezolimo, ezinokuthi zihambelane nezakhiwo ezikhangayo ze-biochar. Yaye ichaza ukusetyenziswa kwe-shungite kwikhonkrithi yokuqhuba umbane.
Lapho iShungite Ifumana Igama Lalo
UShungite ufumana igama layo kwidolophana yaseShunga, elunxwemeni lweLake Onega.
Iingcinga Zemihlaba YeeGoloji
Konke malunga neKartart
Fumana Iimpawu ze-Igneous Rocks
Ukuba ngumqokeleli weRwala
Basalt Umfanekiso Igalari
Yintoni ekhawulezayo? Funda indlela yokusabela ngayo
Funda ngakumbi malunga neChert Rock
Imifanekiso yeGranite Rock
Abazala bafana njani?
I-Grove City College Admissions
14 Izipho zoMnandi zoPianists
Iintlobo ezahlukeneyo zoLwaphulo
2015 uMnu Olympia: Iziphumo
Iimpawu ezibalaseleyo nezingenakubalwa - IziQiniso zeNouns Isifundo
Izibalo zobungeniso kwiYunivesiti yaseBoston
Style Plain kwi Prose
Inkqubela yeBar Example Example
Famous Scientist Izithombe - Amagama
Ukutya okuneyona ndlela ihamba phambili yeCheras yakho
KwiNyuvesi yaseNorthern State
Unqulo Lwenjani Bob Marley?